Isikhulu samaBhokobhoko sizofaka isikhalo ngemuva kokulahlwa amacala
URASSIE Erasmus, umqondisi we-rugby kuleli, ulahlwe yicala lokudelela onompempe Isithombe: BACKPAGEPIX
INHLANGANO eyengamele ibhola lombhoxo kuleli, iSA Rugby, nomqondisi wayo, uRassie Erasmus, bakuqinisikesile ukuthi bazofaka izikhalo ngemuva kokulahlwa amacala abebewathweswe yiWorld Rugby.
Le nhlangano, eyengamele ezombhoxo emhlabeni, ikhiphe isitatimende ngoLwesithathu lapho idalule ukuthi ikomidi elizimele limlahle kuwo wonke amacala ayisithupha abathweswe wona u-Erasmus.
Lokhu kumayelana ne-video ayenza ngemuva komdlalo wokuqala phakathi kwamaBhokobhoko neBritish & Irish Lions ngoJulayi, lapho ayesola khona onompempe ngezinqumo ezithile ayezithathile.
U-Erasmus ujeziswe ngokumiswa izinyanga ezimbili engazibandakanyi nalutho oluhlanganisa umdlalo wombhoxo.
Ubuye wathola esinye isigwebo esimvimbayo ukuthi abe yingxenye yamalungiselelo emidlalo noma yona imidlalo uqobo kuze kube nguSepthemba 30 ngonyaka ozayo kanti kusafanele axolise nakonompempe ayekhuluma ngabo kwi-video.
I-SA Rugby yona ilahlwe ngamacala amabili, elokuqala elokungayilungisi inkulumo eyenziwa ngu-Erasmus kwi-video. Elesibili, limayelana namazwi ashiwo ngukaputeni wamaBhokobhoko, uSiya Kolisi, nephini lomqeqeshi, uMzwandile Stick, esithangamini sabezindaba ngawo uJulayi kophezulu.
I-SA Rugby ihlawuliswe u-£20,000 (ngaphansi kancane kuka-R419 000) yathola nesexwayiso ngokuziphatha kwabaqeqeshi, abadlali nabo bonke abayingxenye yayo.
"I-SA Rugby noRassie Erasmus basibonile isinqumo sekomidi lezomthetho leWorld Rugby," kusho isitatimende. “Zombili izinhlangothi zikuqinisekisile ukuthi zizosebenzisa amalungelo azo ukuphikisa lesi sinqumo.
"Ngeke sisaphawula ngalolu daba kuze kuphothulwe zonke izinhlelo.”
Lokhu kusho ukuthi u-Erasmus ngeke asebenzisane nabaqeqeshi uma amaBhokobhoko esebhekene ne-England eTwickenham ngoMgqibelo ntambama.